I-WordPress: Izifundo, iiplagi, imixholo kunye nophuhliso -Ikkaro
yokuqalisa >> Webmaster >> WordPress
Izifundo kwiWordPress ngesiSpanish. Yonke into ofuna ukuyifumana ukuyifaka, ukumisela kunye nokwenza zonke iintlobo zeeprojekthi ngeWordPress, eyona CMS isetyenzisiweyo kwihlabathi.
Iingxaki eziqhelekileyo kunye nokwenza ngcono. Ndizakushiya usuku nosuku xa usebenza neWordPress kunye nolunye uvavanyo kwi-SEO, ukwenza imali okanye ukukhula.
Ndiza kubonisa zonke iintlobo zeeplagi, imixholo, izixhobo kunye nento esinokuyenza ngazo.
I-Drupal vs. WordPress
Ndiyavuma oko njalo Ndithandane noDrupal. Kodwa ndigqibile ukuyeka ukulula kweWordPress.
Umqondo ngokubanzi oseleyo yile I-Drupal isetyenziselwa iiprojekthi ezinkulu kunye ne-WordPress kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi. Kodwa ukuba zilula njengebhlog yakho, iwebhusayithi yeshishini, ivenkile encinci, njl., Kubhetele ukusebenzisa iWindowsPress.
Ukuba awuyazi kakuhle iDrupal, fumanisa yintoni
Kwaye ukuba iWindowsPress iyakwazi ukuyifaka, ukumisela kunye nokuyisebenzisa nakubani na. Kwaye ngokusekwe kwiiplagi singayinika imisebenzi emininzi kwaye siyiguqule kwi-ecommerce iye kwi-LMS okanye kwiwebhusayithi emileyo. Nangona kunjalo, uvakalelo olunikezelwa nguDrupal kumsebenzisi oqala njenge-webmaster luyothusa.